eNasha : Articles Related to रिलिज in Cinema
Articles Related to रिलिज in Cinema
ठोकठाक कम्पनीका मास्टर
निर्देशक बस्नेत चाहिँ मूलतः सानो बजेटमा छिटै चलचित्र सकाउने मध्येमा गनिएकाले होला, अहिलेसम्म बेरोजगार बस्नु परेको छैन । ...
आँधितुफान, नाम मात्रको !
अपहरण र यसभित्रको अर्थनीतिका विषयमा चलचित्रकर्मी मौनता श्रेष्ठले 'आँधितुफान'को निर्माण तथा लेखन गरेका छन् । चलचित्रलाई निर्देशन गरेका छन्, महेन्द्र बुढाथोकीले ।...
तारे जमीन परः हर अभिभावकले बुझ्नुपर्ने कु
छोराछोरीले पढेनन्, उनीहरुले अभिभावकको कुरा बुझ्दैनन्, सधैँभरि पढाइमा अब्बल हुन सक्तैनन् भने त्यसको उपचार के हुन सक्छ ? आमिर खानले निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्र तारे जमीन परले यो कुरालाई उठाएको छ । ...
रामकृष्णले बढो चतुर्‍याइँपूर्वक उत्तर दिए- "सिनेमाले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ बबाल राम्रो छ ।" उनले यो भनेनन्, सिनेमा एकदम राम्रो छ । उनले यो पनि भनेनन्, सिनेमा नराम्रो छ । उनले भने, उठाउन खोजिएको विषयवस्तु निकै खँदिलो छ, राम्रो छ । ...
कागबेनीः हेर्न किन जरुरी छ ?
एक साथीले सिनेमा हेरिसकेपछि भने- "नेपाली सिनेमा 'हेर्नैपर्ने सूचि'मा पर्न अझै केही वर्ष लाग्छ । तर सिनेमा नहेरिकन एकै चोटी त्यो दिनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । तुलनात्मक राम्रा नेपाली सिनेमा हेर्ने बानी बसाल्यो भने नेपाली सिनेमा हेर्नैपर्ने दिन आउन समय कुर्नु पर्दैन ।" यो चाहिँ तुलनात्मक रुपमा राम्रो सिनेमा बनेको छ । त्यसैले यो सिनेमा हेर्न जरुरी छ ।...
ढिँडो र गुन्द्रुक स्वादमा कागबेनी
थुप्रै निर्देशकीय कमजोरीलाई बिर्सेर कागबेनी हेर्ने हो भने यो एउटा मौलिक नेपाली नेपाली चलचित्र बनेको छ । ...
हल्ला बोलः हल्लै हुन सकेन
लेखक निर्देशक सन्तोषीले विषय चाहिँ राम्रै उठाएका हुन्, तर गलत पात्र मार्फत् ।...
यस्तो अवस्थामा हामी साधारण नेपालीले के गर्ने ? भएका प्रमाणहरुलाई एकत्रित पारेर जनमानसलाई सही सूचना दिने कि चूप लागेर बस्ने ? के तपाइँ हामी चूप लागेर समस्या समाधान हुन्छ ? तपाइँ हामीले गरेको एउटा सानो प्रयास पनि कतै ठूलो समाधान बनेर पो आउँछ कि !...
Data 1 - 15 of 15 [Total 1 Pages]